छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. कर्ण भन्छन् : सेतो दुबी रोग होइन, यसरी हटाउन सकिन्छ – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं, असार ७ । ओठको वरिपरि तथा शरीरका अन्य भागमा दुबी आएको छ रु यदि आएको छ भने सम्बन्धित विज्ञसमक्ष गएर बेलैमा उपचार गरे निको हुन्छ। दुबीकै कारण तनाव लिनु पर्दैन। छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ प्राडा. धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार सेतो दुबी हटाउन सकिँदैन भन्ने सोचाइले कतिपय युवायुवती तनावमा बस्ने गरेका छन्।
छालामा रङ दिने कोष हुन्छ, जसलाई मेलानोसाइट भनिन्छ। मेलानोसाइटको संख्या हरेक व्यक्तिको शरीरमा बराबर हुन्छ। तर, यसले निकाल्ने रङ भने व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। डा. कर्ण भन्छन्, ‘शरीरमा भएको मेलानोसाइटको संख्या घट्यो वा नष्ट भयो भने वरिपरिको तन्तु सेतो हुन पुग्छ। त्यसलाई नै सेतो दुबी भन्ने गरिन्छ।’
एक दशक अघिसम्म अधिकांशमा सेतो दुबी निको हुँदैन भन्ने विश्वास थियो। तर, अहिले सबै खालका दुबीको नेपालमै उपचार हुन्छ। दुबी कति भागमा फैलिएको छ र कति प्रभाव परेको छ त्यसका आधारमा उपचार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। दुबी जति पुरानो भयो उपचारमा झन् धेरै समय लाग्ने डा. कर्ण बताउँछन्। तीन लाख नेपालीलाई सेतो दुबी भएको अनुमान छ। बेलैमा उपचार गरे हटाउन सकिन्छ।
डा. कर्णका अनुसार अनुहार, छाती, पेट, ढाडमा दुबी देखिएको छ भने चाँडै निको पार्न सकिन्छ। औंलामा छ भने समय धेरै लाग्छ। उपचारका धेरै प्रकार छन्। मेडिकल र सर्जिकल गरी दुवै खालका उपचार पद्धति अपनाउन सकिन्छ। डा. कर्ण भन्छन्, ‘आत्मविश्वाससाथ बेलैमा उपचार गराउँदा निको हुन्छ।’ यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
ट्याग्स: dubi, vitilog, white skin